My World: ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ သင်္ကေတ
၁၉၃၃ ခုနှစ်မှာ ဥရောပမှာ စစ်ပွဲတွေပျံ့နှံ့ကုန်ပြီ၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေကလည်း အနှံ့အပြား ပြင်းထန်လာကြပြီ။ အမျိုးသမီးတွဲဖက်အစည်းအရုံး(Women’s Co-operative Guild) ကနေ ပေါ်ပီပန်းဖြူများ(White poppies) တံဆိပ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးတံဆိပ်အဖြစ် ပထမကမ္ဘာစစ်မှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ တပ်သားတွေကို ရည်ညွှန်းပြီး အသုံးပြုခဲ့တယ်။ မူလပေါ်ပီပန်းအနီရောင်တွေကြားထဲမှာ ပေါ်ပီပန်း အဖြူတစ်ပွင့်ပါ တံဆိပ်ပါ။ သွေးစက်တွေကင်းစင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့သင်္ကေတအဖြစ် အဖြူရောင် ပေါ်ပီပန်းပွင့်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ ၁၉၃၄ မှာ အသစ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအထိမ်းအမှတ်ယူနီယံ(Peace Pledge Union- PPU) ဟာ စစ်ပွဲမီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့အချိန် ငြိမ်းချမ်းရေးသမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးသော ဗြိတိသျှအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း White Poppies တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ အဖြူရောင်ပေါ်ပီပန်းတွေဟာ “ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသွားတဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စစ်ပွဲနောက်တစ်ခါဖြစ်မလာတော့ဘူး” ဆိုတာကို ပြချင်တဲ့ ပန်းတွေပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေးသင်္ကေတနောက်တစ်ခုမှာ ရုရှပန်းချီဆရာကြီး နီကိုလပ်စ်ရိုအဲရစ်ခ်ျ(Nicholas Roerich) ရဲ့ ကျောက်ခေတ်ရဲ့ အဆောင် အစက်သုံးစက် (အနုပညာ၊ သိပ္ပံပညာ နဲ့ ဘာသာတရား)ဆိုပြီး အဲဒီသုံးခုပဲရှိတဲ့ စစ်ပွဲမရှိတဲ့ကမ္ဘာအဖြစ် ရည်ညွှန်းဖန်တီးခဲ့တဲ့ တံဆိပ်ပါ။
အခုအထိ လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားပြု တံဆိပ်ကိုတော့ ညူကလီးယားဖျက်သိမ်းရေး Campaign for Nuclear Disarmament အတွက် ဗြိတိသျှပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်နာ၊ Artist ဂျာရဲလ်(ဒ်) ဟားဘာထ့် ဟိုလ်တန် Gerald Herbert Holtom က ၁၉၅၈ မှာ ရေးဆွဲပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ဒီဇိုင်း မူရင်းကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Bradford က Peace Museum မှာ အခုထိ ပြသထားပါတယ်။
ရေကြောင်းအချက်ပြအမှတ်အသား Semaphore အလံမှာ letter “N” အတွက် ဆိုရင်
Vပုံ ဇောက်ထိုး အလံနှစ်ဘက်ကို အောက်ကို ချပြပါတယ်။
Letter “D” အတွက် ဆိုရင် တော့ တစ်ဖြောင့်တည်းပါ။
အဲဒီ N နဲ့ D (Nuclear Disarmament) စာလုံးနှစ်ခုကို ပေါင်းပြီး ဒီဇိုင်နာက တီထွင်ခဲ့တာပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးအလံကိုတော့ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ အီတလီနိုင်ငံက စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ သက်တံရောင်ခြယ်အလံပါ။
PEACE ကို အီတလီလို PACE လို့ရေးကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်တွင်းစစ်တွေ အမြန်ဆုံးရပ်ပါစေ။
ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ။ ။
The Cranberries ရဲ့ protest song/ peace song "Zombie"
International Peace Day 2014: Top Ten Quotes to Observe the Day
The International Day of Peace is observed around the world on 21 September. The day is celebrated to mark the 30th anniversary of the General Assembly Declaration on the Right of Peoples to Peace.
Established in 1981, the day is dedicated to strengthening the bond of peace within and among the countires around the world. It is also known as the day of non-violence and cease-fire.
Below are some great quotes on the International Peace Day.
1. "World Peace Day is envisioned to becomeamoment of global unity - it is up to each and every one of us to make thisareality." - Jeremy Gilley
2. "I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace: to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete." - Ronald Reagan
3. "God of peace, bring your peace to our violent world: peace in the hearts of all men and women and peace among the nations of the Earth." - Pope Benedict XVI
4. "Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding." - Albert Einstein
5. "We must be ready to learn from one another, not claiming that we alone possess all truth andthat somehow we haveacorner on God." ― Desmond Tutu
6. "We like to put sacred texts in flowing waters, so I rolled it up, tied it toapiece of wood, placedadandelion on top, and floated it in the stream which flows into the Swat River. Surely God would find it there." ― Malala Yousafzai
7. "Only the brave men and women can bring peace to the world, not by practicing war but by practicing nonviolence." ― Amit Ray in the book Nonviolence: The Transforming Power
8. "Let us not deceive ourselves; we must elect world peace or world destruction." - Bernard Baruch
9. "May we be saved from evil thoughts and deed of enemies of world peace who find pleasure in creating havoc and perpetrating all forms of carnage." - Yahya Jammeh
10. "Peace demands the most heroic labor and the most difficult sacrifice. It demands greater heroism than war. It demands greater fidelity to the truth andamuch more perfect purity of conscience." - Thomas Merton
Source : http://www.ibtimes.co.uk/international-peace-day-2014-top-ten-quotes-observe-day-1466363